Haintrano nahatsiravina teny Avaratra Ankatso: tsy tafavoaka, zazalahikely roa maty kilan’ny afo | NewsMada
Haintrano nahatsiravina teny Avaratra Ankatso: tsy tafavoaka, zazalahikely roa maty kilan’ny afo
Nanao izay ho afany ihany ny mpiara-monina sy ny mpamonjy voina (pompier), saingy indrisy. Niafara amin’ny famoizana aina ny vokatr’ity haintrano nitranga teny Avaratra Ankatso, omaly, ity. Zazalahikely roa maty kilan’ny afo, tsy tafavoaka tao amin’ilay trano.
Ririnina mavaivay. Ankizilahy miisa roa, 5 taona avy, kilan’ny afo, omaly antoandro manodidina ny tamin’ny 11 ora sy 20 minitra teny amin’ny fokontany Avaratra Ankatso. « Nisy tsy fahatomombanana ny herinaratra (court-circuit) tao amin’ilay trano. Nisy zavatra nipoaka mafy ihany koa », hoy ny fitantaran’ireo mponina eny an-toerana. Antony nitarika ny fahamaizan’ilay trano io. Nohamafisin’ny lehiben’ny sampana mpamono afo etsy Tsaralalàna, ny lietnà kolonely Razafimanahaka Tiana, fa nirehitra avokoa ny taribin-jiro (fil) tao amin’ilay efitry ny rihana faharoa an’ilay trano lehibe biriky, misy rihana roa, efitra nisy ihany koa ireo zaza telo mianadahy. Araka ny fanazavana, tsy nisy olon-dehibe ihany koa tao amin’ilay trano nandritra ny loza. Vokany, sempotra ary may nandritra izany ireo ankizikely roa lahy mpihavana.
Avotra ilay zazavavy herintaona sy tapany
Avotra kosa ny zazavavikely vao 1 taona sy tapany monja. “Ity farany izay nisitrika tao ambany latabatra vy ka avotra ny ainy”, hoy ny loharanom-baovao iray hafa.
« Vetivety ny firehitry ny afo, haingana ihany koa ny namonoana azy », hoy ny tatitry ny lehiben’ny mpamono afo. May tamin’izany ny fandriana, ny latabatra, ny taratasy maromaro sy ny kojakoja samihafa. Kilan’ny afo tanteraka tamin’izany koa valindrihan’ilay efitra, niaraka amin’ireo lamba fitafy. Tsy nisy nahina kosa loatra tao amin’ireo efitra hafa sy ny rihana ambany. Nambarany fa efa matin’ny fokonolona ny afo tamin’ny fotoana nahatongavan’izy ireo teny an-toerana, tokony ho tamin’ny 11 ora sy 40 minitra. Taorian’izay, nanao fanadihadiana ny raharaha izy ireo. Ireo vata-mangatsiaka kosa, nalefa teny amin’ny tranom-patin’ny HJRA taorian’ny loza.